लकडाउनले हुँदाखानेको ‘किचन लक’ « Loktantrapost
लकडाउनले हुँदाखानेको ‘किचन लक’
२६ चैत्र २०७६, बुधबार ११:३९
मेचीनगर । सरकारले देशैभरि ‘लकडाउन’को अवधि बढाएसँगै विपन्न परिवारको घरको भान्सामा ताल्चा (किचन लक) सुरु हुन थालेको छ ।
कोरोना भाइरस भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण अझै बढ्ने सम्भावना रोक्न सरकारले चैत ११ गतेदेखि सुरु गरेको ‘लक डाउन’ले हुने खानेलाई त खान बस्न पाउँदा अझैसम्म आराम होला, तर हुँदा मात्र खाने विपन्न परिवारको घरको भान्सामा भने ‘किचन लक’ भइसकेको छ ।
‘लक डाउन’का कारण दैनिक ज्यालादारी गरी विहान–बेलुका छाक टार्ने श्रमजीवि सुकुम्बासी परिवारले काममा जान नसकेपछि गाँसको समस्याले विकराल रुप लिन थालिसकेको छ । भान्सामा ताल्चा झुन्डिन थालेको छ ।
झापाको करिव ९ लाख जनसङ्ख्यामध्ये आधाजसो मानिसले मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् ।
त्यसमा पनि एकचौथाईको सङ्ख्यामा रहेका मजदुरहरुले दैनिक ज्यालादारी गरी विहान–बेलुका छाक टार्ने अवसर लकडाउनमा गुमाएका छन् ।
सरकारले लकडाउनलाई यसरीनै बढाउँदै जाने हो भने विपन्न मात्र होइन हुनेखानेहरुको पनि कन्तविजोग हुने निश्चित छ । किनभने बैङ्कमा घरजग्गा राखेर कलकारखाना, उद्योगधन्दा तथा पसलहरु चलाइरहेका छन् ।
यहि हालत रहिरहे बैँकको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था पक्कै आउने छ । मुलुककै अर्थतन्त्र चौपट हुने बेला भएको छ । विश्वभरको अर्थतन्त्र डामाडोल भइसक्यो ।
हवाई उडान, यातायात, विदेशी होटल तथा मल र व्यापार व्यवसाय तथा नाकाहरु ठप्प भएकोले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गिरावट आइसक्यो ।
विभिन्न प्रकोपहरुबाट थलिँदै आएका नेपाली जनताले यसपटक फेरे कोरोनाको सङ्क्रमणबाट पीडित भएका छन् । बर्डफ्लु, डेङ्गु, स्वाइनफ्लु, भूकम्प लगायतका विभिन्न प्रकोपबाट नेपाली प्रताडित छन् ।
सरकारले भने झै घरमानै बस्ने, घरबाट बाहिर ननिस्कने, हात नमिलाउने, नमस्ते गर्ने, मास्क लगाउने, एकमिटर परैबाट कुरा गर्ने, सावुन पानीले हात मजाले धुने र सरसफाइलाई पूर्णरुपमा ध्यान दिन सके यसको सङ्क्रमण रोक्न सकिने स्वास्थ्य विज्ञहरुको भनाई छ ।
नागरिकले धैर्य र संयमता अपनाए सङ्क्रमणबाट बच्न गाह्रो हुँदैन । कोरोनाको रोकथाम भनेको नै मुख्य सरसफाई हो । यसको अन्य औषधि छैन ।
सरकारले भने जसरी हामीले कार्यान्वयन गरे, राज्य पनि जनताप्रति उत्तरदायी बन्न बाध्य हुनेछ । जनताको गाँस, बास र कपासको व्यवस्था राज्यले गर्नु पर्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय नियम पनि हो ।
लकडाउन चैत ११ बाट १८, २५ गते हुँदै वैशाख ३ गतेसम्म लम्बिएको छ । लकडाउन अझै केहि महिनासम्म लम्बिन सक्छ । सरकारले आफ्ना नागरिकको वर्गीकरण गरी मध्यम, निम्न र अति विपन्न परिवारको अभिलेख राख्नु पर्छ । विपन्न परिवारका लागि सरकारले तत्काल राहत वितरणमा ढिलाई गर्नु हुँदैन ।
दातृ निकायको मात्र भरपर्ने होइन कि आफुले सक्ने उपाय अपनाउन पर्छ । अहिले सबै देश सङ्कटग्रस्त अवस्थामा ग्रुजिएका छन् । तीन वटै सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि बैङ्कको व्याजमा सहुलियत तथा अन्य सुविधाहरु प्याकेजको रुपमा ल्याउन आवश्यक छ ।
ढिलै भए पनि झापाका स्थानीय तह र केही सामाजिक, सहकारी तथा शैक्षिक सङ्घसंस्थाहरुले आफ्ना क्षेत्रका विपन्न परिवारलाई राहतका रुपमा खाद्यान्न दिन सुरु गरेका छन् । मेचीनगर नगरपालिकाले पनि अति विपन्न परिवारका लागि वडा–वडाबाट राहत बाड्न सुरु गरेको छ ।
राहतका नाममा विपन्न परिवारलाई दिने खाद्यान्न सामग्री हुनेखाने वर्गको घरको भान्सामा पुग्नु चाहिँ पटकै हुँदैन । मध्यम वर्गका लागि भने बैङ्क तथा वित्तीय संघसंस्थामा सहुलियत गरिदिन नगरपालिकाको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ ।
मेचीनगर नगरपालिकाको वडा न. ३ को वडाखाल मावि, वडा नं. ४ सरस्वती मावि, वडा नं. ५, वडा नं.७ को माइती नेपालको भवन, वडा नं. ११ को धाइजन स्वास्थ्य चौकी, आर्दश मावि इटाभट्टामा समेत गरी १०० जना वस्न सक्ने क्वारेन्टाइन स्थल तयार गरिएको छ ।
उक्त क्वारेन्टाइनमा ५० जना नागरिकलाई राखिएको छ । सवै वडाहरुमा विल्चिङ् पाउडर छिट्ने काम धमाधम भईरहेको छ । केहि वडामा छिट्ने काम बाँकी छ । त्यसमा ढिलाई गर्न हुँदैन । सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि परिचालित सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीहरुका मास्क, पीपीई र सेनेटाइजर वितरण गरिएको छ ।
वडाका स्वास्थ्य केन्द्र र इकाइका जनशक्तिलाई सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि परिचालन गरिएको छ ।
नगर क्षेत्रभित्र एम्वुलेन्ससहित २ वटा स्वास्थ्यकर्मीहरुको टोली निर्माण गरी अत्यावश्यक सेवाका लागि परिचालन गरिएको छ ।
काँकरभिट्टा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने ८५ हजार भन्दाबढी यात्रुको इन्फ्रारेड थर्मामिटरबाट हेल्थ डेस्कमा ज्वरो स्क्रिन गरिएको थियो । त्यसमा कसैको पनि पोजिटिभ केस फेला नपरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगर विपद व्यवस्थापन समितिबाट सङ्क्रमण नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य नियमित भइरहेको छ । यसका लागि टोल विकास संस्थाहरुलाई परिचालित गरिएको छ ।
त्यसैगरी नगरबासीलाई सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि नियमहरु पालना गर्न अनुरोध गरेको छ । नियमहरुको अवज्ञा गरे प्रचलित कानून वमोजिम कडा कारवाही हुने जानकारी समेत गराइएको छ ।
भारत लगायतका तेश्रो मुलुकबाट घर फर्किनु भएका सवैले १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्नेछ । स्वास्थ्यमा समस्या देखिए तत्काल वडा अध्यक्ष वा नगरपालिकामा सम्र्पक गर्न, सङ्कटको घडीमा खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको कालोबजारी र मूल्य वृद्धि नगर्न नगरपालिकाले अनुरोध गरेको छ ।
लकडाउनको अवधि बढेसँगै पूर्वी नाका पुरै ठप्प छ । मेचीनगरका बजार तथा पसलहरु पूर्णरुपमा बन्द छन् । काँकरभिट्टा सुनसान छ । बजारमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति छ । नगरपालिका र प्रहरीले नगरबासीलाई घरबाट बाहिर ननिस्कन माइकिङ समेत गरिरहेको अवस्था छ ।
नेपालमा ९ जना सङ्क्रमित मध्ये १ जना उपचार पछि निको भएर घर फर्किएका छन् ।